En vente actuellement 14/08/2018
Atody : Mahalava volo haingana, manala ireo tapatapaka
Sakafo anisanny be otrikaina indrindra ny atody. Somary mavesatrra anefa izy, ka tsy tsara hanina matetika be. Na izany aza, maro ny fomba azo andrahoana azy : endasina, andrahoina, anamboarana mofomamy sy sakafo isan-karazany
ary maro ihany koa ny voka-tsoa entiny
Foulard iray, azo avadika ho kitapo sy akanjo !
Tsy dia azo atao betsaka loatra ny entana entina mandeha miala sasatra. Mba tsy hanavesatra dia mila fantenana tsara ireo akanjo tena ilaina. Hevitra tena mety ny mivimbina foulard, izay azo avadika ho karazan-javatra maro. Santionany ireto 6 ireto.
Fampihetseham-batana 5 mora atao, mahafisaka tsara ny kibo
Efa miezaka ny matihanina aminny fampanaovana fanatanjahantena aminizao fotoana, mitady karazana fampihetseham-batana mora atao, tsy dia manahirana sady azo atao any an-trano. Izany dia mba hitarihina ny olona rehetra hampihetsi-batana. Santionany aminizany ireto atoro anao ireto, izay manafisaka ny kibo nefa tsy dia manahirana.
Mampitombo ny andro hahavelomana ny oroka !
Porofom-pitiavana lalina indrindra, hono ny oroka, manoatra noho ny firaisana ara-nofo aza.
Manaingo molotra atao marevaka, araho ny fanaovana azy
Raha tiana hiavaka kely aminny mahazatra ny endrika dia azo lalaovina tsara ny haingon-tava tsy fanao matetika. Ireto atoronay anao ireto dia maquillage karazany roa, samy miavaka kely kanefa tsotra sady mahafatifaty tokoa, ary saika manendrika ny lokon-koditra rehetra. Mora alain-tahaka ihany koa.
Mandritranyenim-bolanaaoaoriannyfahaterahana no tsymaintsyomenanonon-drenytsymisyfangaronynyzazamenavava.
Hopitaly may tao Taiwan : Olona 9 no maty
Olona 9 no maty ary 15 hafa naratra mafy nandritra ny famaizana nitranga tao aminny hopitaly iray ao Taiwan omaly maraina. Olona marary mafy sy efa an-dalam-pahafatesana ny ankamaroanireo tsaboina ao aminity hopitaly ity.
Nasainy novonoinny olon-tiany ny zanany kely 1 taona
Enjehinny lalàna ary nampidirina am-ponja vonjimaika, noho ny famonoana olona, haratsian-toetra atao aminny zazakely ary fandikana lalàna i Fernando Darocha.
Notre-Dame de Paris Metynisynanapoizinanyranovoahasina
NitarainaavokoaireompinotonganitsidikanyfiangonanaNotre-dame de Paris izaynampiasanyranovoahasina tao an-toerana. Nysasanytaminizyireo nonilaza fa nararyloha, nysasanykosanitaraina ho nisynangidihidynyvatany. Samynieritreritraavokoanyrehetrafanisynanapoizinaityranovoahasinaity.
Nisy lehilahy niaraka tamiko, hay izahay mpihavana fa tsy fantatro raha tsy efa herintaona niarahana. Tena tiako anefa izy. Inona no tokony ataoko ?
Tsy nataotao foana ny fandrarana ny mpihavana mba tsy hivady, fa indrindra tsy hiray ara-nofo. Misy antony ara-tsiantifika mitombina ilay izy, izay mifototra aminny hoe : « consanguinité ».
Mahandro haricots verts matsiro sady mahasalama
Legioma mahasalama ny « haricots verts ». Ahitana azy betsaka eny an-tsena aminizao fotoana izao, ka tsara araraotina. Misy ny tsara ho fantatra mahakasika azy ireny, indrindra ny fomba fandrahoana azy, mba tsy ho very fotsiny ireo otrikaina entiny.
Alarobia : Akoho gasy rony  11.000 Ar
Akora ilaina · Akoho 1kg  10.000 Ar · Sakamalao Alakamisy : Ovy sy toton-kena  7.000 Ar
Vivre cest changer. Voilà la leçon que les saisons nous apprenent. Paulo Coelho
Fiovaovana no lokonnyfandrosoana. Misynykarazanolona no tsy dia tiaanizayfiovaovanaizay fa mifikitrasymizatraaminizayefaiainanysymahazatraazyisanandro. Tahotrynyhoe « sao dia